Diyaraad dagaal tii ugu casrisanayd oo markii ugu horreysay lagu dagaal galay - BBC News Somali
Diyaraad dagaal tii ugu casrisanayd oo markii ugu horreysay lagu dagaal galay
22 Maajo 2018
Xigashada Sawirka, ISRAEL DEFENSE FORCES
Israel ayaa dalbatay 50 diyaaradood oo ah nooca F-35
Diyaaradda nooceedu yahay F-35 oo Mareykanka sameeyay ayaa markii ugu horreysay la arkay iyada hawada ku jirta oo ay hawl gal ku fulinyaan ciidamada cirka ee Israa'iil.
Sarkaalka ugu sareeya ciidamada cirka ayaa soo bandhigay sawir muujinya diyaaradaha oo dul heehaabaya magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, waxa uuna sheegay in diyaaradaha ay haatan weerar ka geysteen laba goobod.
Israel ayaa mar sii horreysay dhowr weerar oo cirka ah ku qaadday Suuriya.
Diyaaradda F-35-ka ayaa ah diyaaradaha dagaalka tan ugu qaalisan dunida oo dhan.
General Amikam Norkin ayaa 20 sarkaal oo madax ka ah ciidamada cirka oo ka socda waddama kala duwan u sheegay: " waxa aan diyaaradda F-35 ka hawl galineynaa dhamaan bariga dhexe waxa aana haatan weerarnay laba goobood oo kala duwan." Balse ma uusan sheegin goobaha halka ay ku yaallaan.
Israel ayaa ah waddankii ugu horeyay ee ka baxsan Mareykanka ee haysta diyaaradda dagaalka ee leh hal kursi oo kaliya, ayaa haatan heshay sagaal ka mid ah 50 diyaaradood oo ah noca F-35 kuwaasi oo ay horay u dalbatay, waxaana laga yaaba in ay gaarsiyaan ilaa 75 diyaaradood.
Weriyaha BBC-da Tom Bateman oo ku sugan Qudus ayaa sheegaya in Israa'iil ay ku doodeyso in diyaaradahaan ay horay ugu isticmaashay hawl galladeeda ka hor hor in mareykanka uu san soo bandhigin.
Maxkamadda ICC oo laga dalbaday in ay baarto xad gudubyada Israail ee Gaza
Israaiil oo duqeyn ka geysatay Masar, Cabdifataax Sisi oo raali ka ah!
Dibadbaxyo looga soo horjeeda nacaybka Yahuudda oo ka dhacay Jarmalka
Israa'iil ayaa sheegtay weerardii cirka ahaa ee ay ka geysatay Suuriya, kuwaasi o ay ku bartilmaamedsanaysay saldhig military oo ay leedahay Iiraan weerarkaasi oo ay iiraan kaga jawaab celisay weerar ku xaruma military oo kiu yaalla buuraha Golan.
Iran ayaa boqolaal ciidan ka joogto gudaha dalka Suuriya, kuwaasi oo ay ku sheegtay in ay tala siiyaan ciidamada dowladda Suuriya.
Mareykanka ayaa ah waddanka ugu baa nee Israel siiyaya gargaar milatray kaas oo gaaraya ilaa 4 biulyan oo doolar.
"Marnaba ma socon doono muddo kororsiga beenta ah, arrintan wadahadal unbay ku dhamaaneysaa"
TOOS Xasan Sheekh Maxamuud: Isku dayga in muddada xoog lagu kororsado waa afgembi ciidan
Waa kuma Saadaq Joon?
Isagoo aan dugsi Quraan, iskuul iyo jaamacad dhigan ayuu noqday bare jaamcadeed
3 Abriil 2021
Maxaad ka ogtahay imaamyada ramadhaanka tukinaya masaajidka Xaramka?
27 Maarso 2021
'Waxaa la igu eedeeyay inaan xayiray kanaalka Suez'
5 Abriil 2021
Qalalaasaha Tigray: "Waxaa nalagu qasbay inaan kufsanno xubno qoyskeenna ka tirsan"
26 Maarso 2021
Caddeymo la helay oo muujiyey iney ciidamada Itoobiya xasuuq ka geysteen Tigraay
Maxay tahay sheekada hadal heynta abuurtay ee jilaagan halyeeyga noqday?
29 Maarso 2021
Ninkii xabsiga ka baxsaday siduu ku noqday duqa magaalada Nairobi?
30 Maarso 2021
Turkiga oo sameystay hub casri ah oo uu Jarmalka horay ugu diiday
31 Maarso 2021
Afar farriimood oo Saadaq Joon u diray dad gaar ah
Masar oo heshay ‘magaalo dahabi ah oo luntay’ oo 3,000 sano jirto
'Hal arrin haddii aan sameyn lahaa, xilligan waxaan ahaan lahaa awoowe'
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 20 Jannaayo 2021